Fa Nnamfo na Woanyɛ Ankonam | Mmabun
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kikamba Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Ossetian Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
1. Fa w’adwene si wo mmɔdenbɔ so. (2 Korintofo 11:6) Ɛwom, eye sɛ wunim wo sintɔ, nanso nneɛma papa pii wɔ hɔ a wubetumi ayɛ. Ebia na wote nka sɛ mfaso nni wo so, anaa woayɛ ankonam. Nanso sɛ wunim wo mmɔdenbɔ a, ɛbɛma woanya akokoduru a wuhia de adi saa suban no so. Bisa wo ho sɛ, ‘Dɛn na mebɔ mu mmɔden?’ Susuw ɔdom akyɛde anaa suban pa bi a wowɔ ho.
2. Fi wo komam dwen afoforo ho. Mfiase no, bɔ mmɔden fa nnipa kakraa bi nnamfo. Aberante bi a wɔfrɛ no Jorge kaa sɛ: “ Wubetumi abisa nkurɔfo sɛnea wɔn ho te anaa wɔn adwuma ho asɛm. Ɛno bɛboa ma moafi adamfofa ase. ”
Wo ne wo nnamfo ntam atetew a, wubetumi asiesie
Nyansahyɛ: Mfa w’atipɛnfo nko ara nnamfo. Wohwɛ Bible mu a, adamfofa a na emu yɛ den paa no, na ebinom wɔ hɔ a wɔn nnamfo anyinyin sen wɔn koraa. Wɔn mu bi ne Rut ne Naomi, Dawid ne Yonatan, Timoteo ne Paulo. (Rut 1:16, 17; 1 Samuel 18:1; 1 Korintofo 4:17) Afei nso, mma wo werɛ mfi sɛ nkɔmmɔ de, nnipa mmienu na ɛbɔ, na ɛnyɛ onipa baako. Sɛ afoforo ne wo bɔ nkɔmmɔ na wutie a, wɔtaa pɛ w’asɛm. Enti sɛ woyɛ obi a wofɛre ade a, kae sɛ ɛnsɛ sɛ wugye nkɔmmɔ no bɔ so!
3. Nya “ tema. ” (1 Petro 3:8) Sɛ wo ne obi nyɛ adwene wɔ asɛm bi ho mpo a, nya abotare ma ɔnkasa nwie. Asɛm a wo ne no yɛ adwene wɔ ho no, fa w’adwene si ɛno so. Sɛ wo ne no nyɛ adwene wɔ biribi ho na wopɛ sɛ woka ho asɛm a, yɛ no bɔkɔɔ na da anifere adi.
Nyansahyɛ: Ɔkwan a wopɛ sɛ afoforo fa so ne wo kasa no, wo nso fa saa kwan no ara so ne wɔn nkasa. Sɛ wo ne nkurɔfo gye akyinnye hunu, wudi wɔn ho fɛw, wudidi wɔn atɛm, anaa wokasa tia wɔn sɛ gyama wo de wuye kyɛn wɔn a, wɔbɛtwe wɔn ho afi wo ho. Nanso sɛ ‘ woma wo kasa ho ba nyam bere nyinaa ’ a, wɔbɛpɛ w’asɛm paa.​—Kolosefo 4:6.
NNEƐMA A WƆADRƆDRƆ AYƐ NO VIDEO
Nnamfo pa ho yɛ nã. Wobɛyɛ dɛn anya bi?
Woayɛ Ankonam Anaa?
Ɔbarima ne Ɔbea Nna, Abrabɔ ne Ɔdɔ
Daa na Me Werɛ Aho—Menyɛ Dɛn?